DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA ONYE NA-ELEKỌTA DEFENDER - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Download ndị ọkwọ ụgbọala maka onye na-akwado egwuregwu
Site n 'ọrụ kwesịrị ekwesị, ezigbo onye nbipute site na a maara nke ọma nwere ike ije ozi ruo ihe karịrị afọ 10. Otu ihe ngwọta dị otú a bụ HP LaserJet P2055, ọfịs ọrụ ọfịs mara maka ịdabere na ya. N'ezie, na-enweghị ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị, ngwaọrụ a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-abaghị uru, mana ịnweta ngwanrọ ịkwesịrị ịrụ ọrụ dị mfe.
Download ọkwọ ụgbọala maka HP LaserJet P2055
Ebe ọ bụ na akụrụngwa dị na ajụjụ agafeela, ọ bụghị ụzọ dị iche iche maka inweta ndị ọkwọ ụgbọala maka ya. Ka anyị malite site na ndị a pụrụ ịdabere na ya.
Usoro 1: Portal Nkwado Hewlett-Packard
Ọtụtụ ndị na-emepụta ngwa ngwa kwụsịrị nkwado ngwaahịa ochie, gụnyere ngwanrọ. Ọ dabara na, Hewlett-Packard adịghị n'etiti ndị ahụ, n'ihi na ndị ọkwọ ụgbọala maka onye na-ebi akwụkwọ na ajụjụ nwere ike ibudata ya na weebụsaịtị.
Jiri njikọ n'elu, na mgbe ị na-ebudata ibe ahụ, pịa nhọrọ "Nkwado"wee họrọ "Software na ndị ọkwọ ụgbọala".
Ọzọ, họrọ ngalaba a raara nye ndị na-ebi akwụkwọ - pịa bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
N'oge a, ịkwesịrị iji engine nyocha - tinye aha nke ngwaọrụ ahụ, LaserJet P2055wee pịa nsonaazụ na menu nchịkọta.
Họrọ sistemụ arụmọrụ achọrọ, ma ọ bụrụ na ndị ọkwọ ụgbọala maka onye ọkwọ ụgbọala kpọmkwem adighi nma gị, jiri bọtịnụ ahụ "Gbanwee".
Ọzọ, gbadaa na ngọngọ ahụ na ndị ọkwọ ụgbọala. Maka ọtụtụ sistemụ arụmọrụ, ma e wezụga ezinụlọ * nix, ọtụtụ nhọrọ dị. Ihe ngwọta kachasị na Windows bụ "Igbe ntinye ngwaọrụ" - gbasaa ngalaba kwekọrọ na pịa "Download"ibudata akụrụngwa a.
Mgbe nbudata zuru ezu, gbanye onye nhazi. Oge ụfọdụ "Wizard Wụnye" ga-akwusi ihe onwunwe ma kwadebe usoro. Mgbe ahụ, windo ga-apụta na ụdị ụdị nhọta. Nhọrọ "Ntinye ngwa ngwa" zuru oke, ebe "Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ" gụnyere usoro nke ịgụta nkwekọrịta na ịhọrọ ihe ndị a ga-arụnye. Tụlee nke ikpeazụ - lelee ihe a wee pịa "Na-esote".
N'ebe a, ị ga-ekpebi ma ị ga-achọ imelite ngwa ngwa akpaaka. Nhọrọ a bara ezigbo uru, ya mere anyị na-akwado ịhapụ ya. Ịga n'ihu, pịa "Na-esote".
Nzọụkwụ a, pịa ọzọ. "Na-esote".
Ugbu a, ị ga-ahọrọ mmemme ndị ọzọ na arụnyere na ọkwọ ụgbọala ahụ. Anyị na-akwado iji nhọrọ ahụ "Omenala": ya mere, ị nwere ike ịmara onwe gị na ngwanrọ a chọrọ ma kpochapụ nrụnye nke enweghị isi.
Maka Windows 7 na okenye, naanị otu ihe ọzọ dịnụ - Mmemme Ndị Mmekọrịta HP. N'akụkụ aka nri nke mpio ahụ, e nwere ihe ọmụma gbasara mpaghara a. Ọ bụrụ na ịnweghị ya, kpochie igbe ahụ n'ihu aha ya ma pịa "Na-esote".
Ugbu a ịkwesiri ịnabata nkwekọrịta ikike - pịa "Nabata".
A ga-eme usoro ndị ọzọ na-enweghị nkwụnye ọrụ, echere ruo mgbe echichi zuru ezu, mgbe nke ahụ gasịrị, atụmatụ nile nke onye nbipute ahụ ga-adị.
Usoro 2: Akụrụngwa nke atọ iji melite ndị ọkwọ ụgbọala
HP nwere ihe ngosi nke aka ya - ihe enyemaka HP Enyemaka Nkwado - mana iweputa LaserJet P2055 adịghị akwado ya. Otú ọ dị, ngwọta ndị ọzọ sitere na ndị mmepe nke ọzọ nwere nkwenye zuru oke na ngwaọrụ a ma nwee ike ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala ọhụrụ maka ya.
Gụkwuo: Software maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị ṅaa ntị na DriverMax - ezigbo ngwa, ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha bụ nke bụ nchekwa data dị ukwuu na ike ịhọrọ ụdị ọkwọ ụgbọala kpọmkwem.
Ihe ọmụmụ: Jiri DriverMax mee ka melite ngwanrọ
Ngwaọrụ niile ejikọrọ na kọmputa nwere koodu ngwaike mara dị ka ID ID. Ebe ọ bụ na koodu a pụrụ iche maka ngwaọrụ ọ bụla, enwere ike iji ya ịchọ ndị ọkwọ ụgbọala na ngwaọrụ. The HP LaserJet P2055 na-ebipụta nwere ID na-esonụ:
A ga - achọta koodu a na ihe dị n'okpuru.
Ihe omumu: ID ihe nchoputa dika onye nyocha
Ọtụtụ ndị Windows na-echedịghị na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka HP LaserJet P2055 na ọtụtụ ndị ọzọ na-ebipute na-enweghị ike iji mmemme nke atọ ma ọ bụ ihe ntanetị - naanị jiri ngwá ọrụ ahụ. "Wụnye Mbipụta".
Meghee "Malite" wee pịa "Ngwaọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ". Maka nsụgharị nke Windows, chọta ihe a n'iji "Chọọ".
Na "Ngwaọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ" pịa na "Wụnye Mbipụta"ma ọ bụghị "Tinye onye nbipute".
Ndị ọrụ Windows nke usoro nke asaa na okenye ga-aga ozugbo ịhọrọ ụdị nbipute iji jikọọ - họrọ "Tinye onye nbipute mpaghara". Windows 8 na ndị ọrụ ọhụrụ ga-achọ ịlele igbe ahụ. "E depụtaghị m onye nbipute"pịa "Na-esote", na mgbe ahụ họrọ ụdị njikọ.
N'oge a, debe ọdụ ụgbọ mmiri na iji "Na-esote" na-aga n'ihu.
Ndepụta ndị ọkwọ ụgbọala dị na usoro ahụ ga-emepe, wepụta ya site na onye na-emepụta na ihe nlereanya. N'akụkụ aka ekpe, họrọ "HP", na nri - "HP LaserJet P2050 Series PCL6"wee pịa "Na-esote".
Tọọ aha onye nbipute, wee jiri bọtịnụ ahụ ọzọ. "Na-esote".
Usoro a ga - eme usoro ndị ọzọ n'onwe ya, ya mere, ọ bụ naanị iji chere.
Ụzọ anọ ịchọta na ibudata ndị ọkwọ ụgbọala maka mpịakọta HP LaserJet P2055 kachasị mma site na echiche nke nkà na mgbalị a chọrọ.